The Crazy Climb: a Videogame maka online ruleti!
Site na oru ohuru a ana m agwa gi ezigbo ihe omuma na ubi nke play: a Videogame na-egwu ma merie online roulette!
Ọganihu abụọ iji gbalịa ịkụ egwu roulette na ọdịiche dị ndụ àmụmà o Ọ bụ!
Roulette Videogame: Kedu ihe ọ bụ?
Nke a bụ nke mbụ egwuregwu vidio egwuregwu nke m na-eweta, bụ egwuregwu vidio nke na-akpaghị aka na tebụl roulette iji mee ka onye ọkpụkpọ nwee ọ'sụ.
Nyere na ọ nweghị usoro nke mgbakọ na mwepụ na mgbakọ na mwepụ na ogologo oge, naanị otu ihe bụ na onye ọkpụkpọ nwere ike imeri ọtụtụ, mana naanị na obere oge, nke casinos mara nke ọma nke ọma na ọ bụ naanị ihe ha na-atụ egwu.
Ya mere mara na usoro ọ bụla nke na-egosi gị ịbawanye nzọ gị oge ọ bụla agbapụ furu efu, na omume ọ dịghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ịme ka cha cha merie ego gị, ebe ọ bụrụ na nzọ ahụ abawanye mgbe ọkpụkpọ ahụ meriri onye ọkpụkpọ ahụ, na omume akụkụ nke ego meriri na ụlọ akụ na-eweghachi na play.
Kedu ihe kpatara saịtị niile na-akwado igwu egwu na casinos na-enye usoro ọrụ ebube dabere na martingale?
Azịza ya dị mfe: ka ego onye ọkpụkpọ na-efunahụ, ego ha na-enweta site na ọrụ mgbakwunye. Ọ gwụla.
Otu esi eji ya The Crazy Climb?
Akụrụngwa maka roulette The Crazy Climb gbalịa iji mmeri iji usoro egwuregwu abụọ, otu metụtara ndị ochie ndu roulette na ugwo nke onu ogugu 36 rue 1 na nke ozo raara nye Lightning ma ọ bụ Quantum roulette, ebe ugwo maka onu ogugu ndi agha bu nani 30 ka 1, obu ezie na enwere ike inweta ego ndi ozo site na otutu nke mmeri rue x500.
Banyere ọnọdụ mbụ, ọ bụ maka ịbawanye nzọ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọgbụgba ọ bụla meriri ma mee ka anyị nwekwuo mmeri, ọganihu nke ọkọlọtọ na-agụnye ịba ụba ọnụọgụ nọmba na ntinye ọ bụla.
Versiondị Standard na-enye 11 dị ndụ na ọkwa ọ bụla ọnụ ọgụgụ nke nzọ na-abawanye, na-emekwa ka ohere anyị nwere mmeri nke ọkwa ahụ bawanye.
Ọganihu a na-amalite site na otu otu site na ọnụ ọgụgụ, mgbe ahụ, a na-agbanye nkeji iri na itoolu na ọkwa mbụ, ruo na nke kachasị nkeji iri na asaa na ọkwa iri na otu, nke mmeri ma na-emeri mmeri nke 650 nkeji!
Iji nyekwuo ike na ego onye ọkpụkpọ ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa niile ọbụlagodi na ọnwụ funahụrụ maka mmeri nke nkeji ụfọdụ.
Mmeri na kwantum roulette!
Ọganihu nke abụọ dị nnọọ iche, ọ dabere na ya 6 dị ndụ, dị ka na Lightning (ma ọ bụ Quantum) roulette ihe mgbaru ọsọ abụghị iru ọkwa kachasị elu, mana inwe ike ịme ọnụọgụ kachasị, na-anwa idobe ego anyị na nguzozi, nke a iji gbalịa ịbawanye ohere anyị nwere mmeri nọmba ego, n'eziokwu, ọnụọgụ kachasị nke roulette a ruru oge 500, yabụ anyị nwere ohere iji merie ruo 1000 nkeji mgbe anyị na-elekwasị anya nkeji abụọ na ọkwa 4 ma ọ bụ 6 nke ọganihu Lightning.
Ntị: ndị a abụghị ezigbo roulette, ha yiri nnọọ oghere igwe, ya mere odi nkpa iguzobe otu Kwụsịnụ, nke pụrụ ịbụ mgbe anyị merie a daashi nọmba, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị jikwaa iji merie dịkarịa ala 50% nke Bankroll mbụ anyị.
Yabụ ọ bụrụ na ọmụmaatụ, anyị bidoro egwuregwu na nkeji 100 wee jikwaa ruo 150, ọ dị mma ịkwụsị ma gbalịa igwu egwu ụbọchị ọzọ.
Nkwado ikpeazụ bụ nke akpọkwala rng roulette, ma ọ bụ naanị maka ndị dị ndụ nwere ezigbo onye na-ere ahịa, roulettes na-akpaghị aka adịghị mma, maka ndị otu iwu ahụ metụtara ndị Lightning ma ọ bụ Quantum.
The Crazy Climb: Mbido
Emere ịtọlite ​​okpokoro ahụ dịka ị hụgoro na vidiyo nke mmemme ndị ọzọ m, ọ dị nnọọ mfe, rụọ ọrụ nhọrọ ahụ "Oghere Spacebar Turbo”Na ịtụkwasị òké cursor na onye nọmba, ị nwere ike pịa oghere mmanya na-akpaghị aka na-abanye na-achịkọta maka nzo.
Dị ezigbo mkpa bụ nhọrọ "Ké Pịa SpeedN'ezie, ọ bụrụ na ị hụ na mmemme ahụ enweghị ike ịkụ nzọ nọmba niile ma ọ bụ nkeji chọrọ maka ọkwa ọ bụla nke ịga n'ihu, bulie uru a na 50, 100 ma ọ bụ 150 ma ọ bụ nke kachasị mma maka gị.
Ọ bụrụ na ị na-egwu ọganihu ọkọlọtọ, na ọkwa 11 enwere 17 nkeji ịkụ nzọ na nọmba ọ bụla, yabụ ọ dị ezigbo mkpa iji nyochaa na mmemme ahụ ga-enwe ike ịkụ nzọ niile.
Iji dozie nsogbu a na ikpe e nwere nhọrọ a na-akpọ "Arọ Bet”, Ebe ị nwere ike iji aka tinye nọmba nke nkeji ịkụ nzọ mgbe ịhọrọ ha na tebụl egwuregwu.
Ọ bụrụ na ị na-eji nkeji iri nke 10 na-egwuri egwu ma ị ga-etinye 10 nkeji maka nọmba ọ bụla, kama ịkụ nzọ ugboro 10 na nọmba ọ bụla, ịnwere ike ịgbalite nhọrọ ahụ wee họrọ otu euro euro na tebụl egwuregwu na mgbe ịpịrị na triangle na-akpaghị aka ihe omume a ga-etinye naanị otu euro maka mkpụrụ okwu ọ bụla.
M na-echetara gị na nke a bụ ngụkọta oge a ga-emerịrị n'uche na ngwa ngwa, yabụ ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịchọta tebụl na-enye ohere ịgba ọsọ ọsọ ọsọ, dị ka nke m chọtara na cha cha ndụ nke saịtị ahụ nke gosipụtara na vidiyo ahụ. na ►YouTube.
Jiri pc ahụigodo
Na ọkwa ọ bụla ọ ga-ekwe omume iji naanị keyboard kọmputa wee nwee ike ịkụ nzọ na nọmba site na ịpị igodo ahụ Tinye na igodo onu ogugu ma tinye ogbugba mmeri ma obu tufuo iji igodo + o - na igodo onu ogugu
Biko mee nyocha ahụ nke mbụ, na mmemme ahụ enwere ike ịlele ọrụ nke igodo dị iche iche, lelee nhọrọ ahụ "Enweghị Bet”,, Na nke a enweghị nzọ ga-eme ma ịnwere ike ịnwale igodo niile iji lelee ọganihu nke ịga n'ihu.
Dị ezigbo mkpa: agbanweghi ụdị ọganihu n'oge egwuregwu ahụ, mana tupu ịmalite egwuregwu ọhụrụ.
N'ikpeazụ, iji bọtịnụ dị n'okpuru aka ekpe (igwefoto) ị nwere ike ichekwa na folda nchekwa ahụ "screenshots”Ihe osise niile nke mmeri kacha mma gị ma biko zitere m otu!
Nbudata Nbudata	CClimb.zip - 3 MB